Amathiphu ngempilo yezingane - Zibandakanye | Eyethu News
Amathiphu ngempilo yezingane – Zibandakanye
NGOKWESITATIMENDE sakwa- ER24 sithi inyanga uMashi igxile kwi- School Health Week abanye othisha banemithwalo ethize, kodwa kufanele abazali bangenelele ngoba kuthinta izingane zabo.
• Angabe izingane zenu zihleliwe ngokugoma kwabo? Khumbula ukuthi imigomo ivikela izingane kwizifo eziyinkinga empilweni zempilo ukuthi uvikeleke kwizifo ezilaphekayo. Qiniseka ukuthi bayayithola imigomo yabo.
• Ukuvakashela udokotela kubalulekile ikakhulukazi izingane ezincane, ukubheka ukuthi zikhula kahle yini. Kubalulekile ukuthi amehlo engane nokuzwa kwayo njengesibonelo ukuthi kuhlolwe.
• Impilo ejwayelekile yokuvakashela udokotela iyadingeka. Uma ingane yakho ingazizwa kahle, kumele ufune usizo lwezokuphepha. Futhi ungayiyisi esikoleni uma inokugula okungatheleleka kwezinye.
• Angabe ingane yakho idlani? Qiniseka ukuthi inohlelo lokudla olunempilo, kubalulekile lokhu. Phela ukudla endlini kuyisidingo kunokuthi uthenge ngaphandle. Chazela ingane yakho ukuthi kungani kubalulekile ukunakekelwa kwempilo. Vumela izingane zakho ukuthi zibe nawe uma wenza ukudla kwazo ezikuphatha esikoleni. Bafundise ukuthi babheke amalebuli okudla futhi nokuba nempilo kwako uma sebebadala ukuthi bangazwisisa. Futhi lokhu kuzobasiza kakhulu ukuthi bangakuthengi ukudla okungalungile esikoleni. Kungenzeka ukuthi ngeke ukwazi ukuthi umyekise ukudla oshukela nosawoti kodwa ungakhawula kwizinto ezifana noswidi nokuphuzwayo okunoshukela nokunye ukudla okungenampilo.
• Khuthaza izingane zakho ukuthi zibambe iqhaza kwezemidlalo. Khetha ezemidlalo ocabanga ukuthi ingathanda ukuzidlala. Lokhu kungenza ngcono impilo yengane futhi nomzimba ukuthi ubenempilo uphinde uthukuthise ukuzithemba kuyona nokwenza kangcono umsebenzi, yenze nabangani, bafunde nokusebenza ngamaqembu nokugcina isikhathi.
• Chithani isikhathi ndawonye nenze izinto ezinganijabulisa nisekhaya ukuze nisondelane nazane futhi nijwayelane nengane yakho. Babuze ukuthi usuku lwabo lube njani esikoleni futhi ubasize ngokwenza umsebenzi wesikole abawunikeziwe. Lokhu kuzosiza ukuhlola ukuthi ingane yakho yenzani futhi kuzokwenza ukuthi nisondelane nabo.
• Omunye umsebenzi onzima kubazali abaningi ukuba naleya ‘nkulumo’. Kungabanzima uma kufanele kube khona okwenziwe. Izihloko ezinzima ezifana nokukhuluma ngocansi, okumele kuxoxwe nezingane ukuze zifundiswe ngobungozi bakho. Kubalulekile ukuthi zifundiswe ngobungozi bezidakamizwa, ukubhema nokuphuzwa kotshwala.
• Ukucindezelwa otanga ,ukuhlukunyezwa, ukubanzima kokungakwazi ukuqonda isifundo esithile esikoleni. Lezi izinkinga intsha ehlangabezana nazo. Iba nokudlwelwano obuvulekile futhi obusondelene nengane yakho. Ingane iyakwazi ukuza kuwena uma kukhona ukuthembana phakathi kwenu. Thola usizo kubeluleki lapho kunesidingo salokho. Fundisa izingane mayelana nezindaba ezifana nokuhlukunyezwa ngokobulili nodlame. Abazi ukuthi bangeza kuwe bazofuna usizo. Abantu ababaziyo abazali abanecala, kufanele kubikelwe amaphoyisa ngawo.